FIKRADDA GANACSI U GAAR AH: IIBINTA ALAABO BEY'ADEED OO SAAXIIBTINIMO LEH - WARARKA
Hadda dadku waxay xaqiiqsadeen in isticmaalka qalabka kiimikada aan-dabiiciga ahayn ay waxyeello u geystaan ​​caafimaadkooda. Tusaale ahaan, ku yaala dukaamada dukaamada waxaad ka heli kartaa dhadhan, xayawaanka dhirta, dhadhanka.
Taasina waa sababta maanta, bulshadu isku dayayso inay soo iibsato alaabeed. Sidee ugu ballan-qaadan kartaa ganacsigan ee Russia?
Shirkadaha iibiya alaabta dabiiciga ah waxay ku yaalaan magaalada Moscow iyo St.Petersburg waxayna xoogga saaraan iibsadaha dakhliga sare leh.
Shirkadda eco-waxaa laga heli karaa shirkadaha sida "Alphabet of Taste", "Globus Gurme", "Bio Market".
Waxay siiyaan alaabta dukaamada tafaariiqda. Gobollada, xaaladda way ka duwan tahay.
Waxaa jira dib u dhac ku yimaada iibinta alaabada dabiiciga ah. Tartanka ganacsigani wuxuu aad u yaryahay, waxaana jira dad ku filan oo dakhligoodu sarreeyo.
Magaalooyinka waawayn, waxaa jira tiro yar oo dukaamo ah oo iibiya alaabta jawiga deegaanka ah. Sidaa daraadeed, hadda waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo aad ganacsi u furi kartid isla markaana aad hogaamiso.
Sida loo furo dukaanka alaabta dabiiciga ah?
Haddii aad doonayso inaad furto dukaanka yaryar, ka dibna nooca sharciga ah ee ganacsadaha shaqsiyadeed ayaa sameyn doona. Dadka doonaya inay furaan shabakad weyn oo ah dukaamada xaraashka ah ama dukaamada waawayn, waxaa habboon in la diiwaangeliyo LLC.
Cabbirka aagga waxay ku xiran tahay rabitaankaaga. Wuxuu noqon karaa wax kasta. Dukaamada waawayn ayaa ugu fiican qolal gooni ah oo leh irid raaxo leh oo ka taxaddar in ay jirto meel baarkin ku dhow.
Soo-bixiyeyaasha waa in horay loo helaa.
Tan iyo hadafku waa iibinta badeecadda deegaanka bey'adda, markaa waxay u baahan doonaan inay si toos ah uga iibsadaan beeraleyda.
Waxaa jira beeraley tiro yar oo ku hawlan beeraha, sababtoo ah alaabadooda ayaa dalbanaya..
Ka hor inta aadan gashan qandaraas la leh beeralay, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in hababka koraya ee alaabadu ay kugu habboon yihiin. Tan waxaa ugu wanaagsan in aad tagto beerta, fiiri shuruudaha. Kadibna si cad u xaajoodka beeralayda oo dhan shuruudaha sii kordhaya alaabta (tusaale, noocyada Bacriminta, ilaalinta kiimikada, quudinta).
Ecoproducts waa inay ahaato mid nadiif ah, sidaas darteed meesha ay ku weynaanayaan waa in aan la bakteerin. Haddii uu jiro hawo wasakhaysan oo hawada ku dhow, markaa waa ka fiicnaan inaad diiddo inaad la shaqeyso beeraley sidaas oo kale ah.
Marka dukaanku u furo shaybaarka si uu u xakameyo tayada alaabta. Haddii aadan furi karin, markaa waxaad u baahan tahay inaad heshiis la gasho shaybaaro madaxbannaan oo magaaladaada ka mid ah.
Liiska noocyada alaabta ee laga iibsan karo dukaamada eco-saaxiibtinimo: hilibka iyo hilibka hilibka, miraha cusub, khudradda, berbera, cagaarka, ukunta, wax soo saarka, iyo wixii la mid ah.
Waa in la xusuustaa in dhammaan alaabooyinka ay tahay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey alaabooyinka bey'ada u leh jawi saaxiibtinimo..
Waxyaabaha dabiiciga ahi waxay leeyihiin nolol shafo gaaban, markaa si taxadar leh uga fikir habka wax soo iibsiga.
Qalabka iyo sahayda
Si aad u qalabaysatid dukaanka, waxaad u baahan tahay inaad iibsato qaboojiyaha, makiinada, soo bandhigida qaybaha, diiwaanka lacagta iyo miisaanka ganacsiga.
Waxyaabaha la isticmaalo waxaa ka mid ah baakidhka alaabooyinka, taraamka, filimka cuntada, baakadaha (iibsadaha). Baakadaha warqadda ayaa ugu fiican. Midabka cagaaran gudaha gudaha wuxuu siin doonaa dukaanka jawi caafimaad iyo kookoob.
Shaqaaluhu waa inuu ku jiraa iibiyeyaasha, la taliyeyaasha cuntada ee cuntada, kuwa dhaqdhaqaaqa, maamulaha, shaqaale farsamo, darawal, iyo xisaabiye. Si kastaba ha ahaatee, sida dukaamada caadiga ah.
Haddii aad rabto in aad ganacsigan si dhow u qaadato, markaa waxaad qaadan kartaa meelo gaar ah. Tusaale ahaan, waxaad noqon kartaa maamulaha iyo kormeerka shaqaalaha, maareeyaan iibsashada.
Qodobka muhiimka ah ee kor u qaadida ganacsiga waa xayeesiin. Waxaad u baahan tahay inaad iibiso alaabta, sababtoo ah qiimaha alaabta-eco-du waxay ka sareeyaan kuwa fudud. Iyo inta badan waxay soo iibsadaan wax qiimo jaban.
Ujeedada xayaysiinta waa in loo gudbiyo iibsadaha in alaabooyinka bey'ada ku haboon ay aad u faa'iido badan yihiin. Dhammaan shahaadooyinka, kuwaas oo sheegaya in alaabtu ay yihiin dabiiciga, oo lagu duubo dukaanka.
Maxaad kaloo ku kasban kartaa?
Waxaad furi kartaa dukaanka online -ka ah.
Aad ayay u fiicantahay: iibsadaha ayaa awood u yeelan doona inuu alaab iibsado oo uu helo alaab guri.
Waxa kale oo aad dhexdhexaadin kartaa beeralayda iyo dukaamada, haddii aad xiriir wanaagsan la leedahay beeralayda. Sidaa darteed, waxaad heli kartaa qadar badan oo alaab ah.
Mid ka mid ah beeraleydu ma awoodi doonaan inay bixiyaan dukaamada weyn, sidaas darteed, iskaashatada beeralayda dhowr ah, waxaad ka iibsanaysaa waxyaabo badan oo ka yimaada soo saarayaal badan oo iibiya dukaamada. Sida aad u arki karto, si aad u furto dukaamada qalabka bey'ada u ah saaxiibtinimo ma aha mid aad u adag, laakiin halkan maantana waa muhiim.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Wararka 2020